Kabineetka MM Godey Oo Loo soo jeediyay Barnaamijka Ciidanka Horumarka Caafimaadka - Cakaara News
Kabineetka MM Godey Oo Loo soo jeediyay Barnaamijka Ciidanka Horumarka Caafimaadka
Godey(cakaaranews)khamiis 16ka February 2017. Shir ay isugu yimaadeen xubnaha kabineega Maamulka magaalada Goday islamarkaana lagu soo jeedinayay dhismaha barnaamijka ciidanka horumarinta caafimaadka si fahan midaysan looga yeesho barnaamijka ayaa si habsamileh uga qabsoomay Xafiiska Maayorka Maamulka Magaalada Godey.
Hadaba,shirkan ayaa waxaa ugu horayntii furay maayorka maamulka magaalada godey mudane Caabdisamad Aadan Cusmaan oo ugu sheegay in shirkan ujeedadiisu tahay soo jeedinta iyo dhagaysiga barnaamijka ciidanka horumarinta caafimaadka. Wuxuuna intaa kudaray in xubnaha kabineetku ay ka talo bixinayaan barnaamika islamarkaana laga doodi doono tubtii loohirgalinlahaa. Kadibna maayorka ayaa kusoo dhaweeyay Iskuduwaha Waaxda Fidinta Caafimaadka iyo Wacyigalinta DDSI mudane Cabdi Faarax oo si qoto dheer u soo jeediyay isagoo kahadlay ueedooyinka laga leeyahay hirgalinta barnaamijkan iyo faa’iidooyinka uu u leeyahay bulshada deegaanka gaar ahaan m.m godey.
Kadib Soojeedintii iskuduwuhu soo jeediyay barnaamijka ayaa xubnaha kabineetku ka talobixiyeen islamarkaana gurigu islaqaatay jihooyinkii loo hirgalin lahaa iyadoo halkaas lagu dhisay gudiga hagida guud ee barnaamijka ee heer magaalo, xilka iyo waajibaadkiisuna noqon doono mid si joogta ah uqiimeeya xaalada iyo geedisocodka labadii 7aadba halmar.
Iskusoowada duuboo, shirkan ayaa kusoo dhamaaday jawi wanaagsan oo farxadi kudheehantahay.